Xarunta GECPD Gaalkacyo oo Soo Gabagabaysay Tartanka Isdhex-galka Dhalinyarada Mudug [Sawiro] - Horseed Media
Xarunta GECPD Gaalkacyo oo Soo Gabagabaysay Tartanka Isdhex-galka Dhalinyarada Mudug [Sawiro] October 16, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleXaflad balaaran oo lagu soo afmeerayay tartan ciyaareed mudo ka socday garoonka cayaaraha ee GECPD ee magaalada gaalkacyo ayaa maanta si heer sare ah loogu qabtay garoonka GECPD.
Tartankan oo ay soo qaban qabisay xarunta waxbarshada iyo Horumarinta Nabadda ee gobolka Mudug ayaa loogu tala galay is dhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug iyo horumarinta dhalinyarada.
Munaasabadan xiritaanka ah ayaa waxaa ka soo qayb galay Wasiirka shaqada, shaqalaha, Dhalinyarada & Ciyaraha Puntland C/wali Xirsi Cabdulle ( Indha- guran) ,gudoomiyaha gobolka Mudug Mxamed Yuusuf jaamac , gudoomiyaha Cayaaraha gobolka Mudug mudane Cabdihodan Axmed iyo marti sharaf kale oo ka socotay qaybaha bulshada gobolka Mudug.
Ciyaartii kama danbaysta ahayd ee finalka ayaa dhexmartay kooxaha Fc Telcom iyo kooxda Fc Siinay oo ka tirsan kooxaha hoostaga Ururka horumarinta Dhalinyarada gobolka Mudug waxaana ciyaartas ay ku soo idlaatay bar-bar dhac gool la’aan ah iyadoo sida sharciga ah lagu kala baxay lug-kulaad ( Riigoorayaal) waxaana guusha ciyaartaas la hoyday kooxda Fc Telcom Puntland.
Gabagabadii ciyaarta ka dib waxaa munaasabada abaalmarino kala duwan ka bixiyay Wasiirka shaqada, shaqalaha, Dhalinyarada & Ciyaraha Puntland C/wali Xirsi Cabdulle ( Indha- guran) oo gudoonsiiyay kooxdii guulaysatay koob iyo abaalmarin kale oo qaali ah.
Wasiirka oo hadal kooban ka jeediyay xaflada ayaa aad u amaanay waxqabadka muuqda ee xarunta GECPD ay ka wado gobolka Mudug isla markaana lagu horumarinayo cayaaraha dhalinyarada iyo isdhexgalka bulshada ku nool gobolka
Indha- guran aya balan qaday in wasaaradiisu ay qaban doonto tartan ciyaareed ka dib markii ay aragtay sida wanaagsan oo ay klu soo dhamaaden tartamadii ay soo qabatay xarunta Horumarinta Waxbarshada iyo Nabada ee gobolka Mudug.
Cabdihodan Axmed Cali ( Dayax-leef) gudoomiyaha cayaaraha gobolka Mudug ayaa isna soo dhaweeyay waxqabadka xarunta kuna tilmaamay waajibad saarnaa oo ay si wanaagsan u guteen .
Macalin maxamed Cabdalle Adan gudoomiyaha ururka Horumarinta cayaaraha ee gobolka Mudug oo ahaa qabanqaabiyihii tartankan ayaa isna u mahad celiyay dhaman dhalinyaradii ka soo qayb gashay tartanka waxaana wasaarada dhalinyarada iyo cayaaraha Puntland uu ka codsaday in ay wax ka qabato horumarinta cayaaraha gobolka.
Ugu danbeytii Gudoomiyaha gobolka Mudug Mudane Maxamed Yuusuf Jaamac (Tigey) ayaa isna la hadalay dhalinyaradii ka soo qayb gashay tartankan kuna amaanay sida wanaagsan oo ay ku soo dhamaatay waxaana uu ka codsaday in ay ka shaqeeyaan dhanka nabadgalyada iyo xasiloonida gobolka Mudug.